← दलहरु माथी पुर्वप्रधानशेनापतिको कटुवालको आक्रोस, सरकारको आदेश मानिरहेको शेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको के ? युनियन खोल्ने भनेको ?, या दलहरुको समर्थनमा जिन्दावाद–मुर्दावाद बोल्न लगाउन खोजेको ?
बाइक किन्न कर नगर्नू →
पार्टी र सरकारप्रमुखहरूबीचको सम्बन्धमा शिथिलताले एमालेको आकारप्रकारमै असर गररिहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ। त्यो पार्टी अहिले पार्टी नभई मोर्चाजस्तो बनेको छ। पार्टीका मुखियाले एकथोक भन्दा सरकारका नाइकेले अर्कै भन्छन्। एकले अर्कालाई पछार्ने यो खेल टुंगिने कुनै छाँटकाँट पनि देखिन्न, बरु इबि गहिरँिदै जानेजस्तो लक्षण छ। कतै, उसै त रनभुल्ल एमाले यी दुई हस्तीको कुस्तीले आफँै बजारनिे त होइन ?